Mpempe Akwụkwọ Dị n’Okpuru Ígwè E Ji Asa Ákwà
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Basque Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Lari Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mashi Maya Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Mgbe e mechara Zarina baptizim ya aghọọ Onyeàmà Jehova, o si na Rọshịa laghachi n’obodo ya dị n’Eshia. O kpebisiri ike inyere ụmụ ya nwaanyị abụọ aka ka ha ghọọ Ndịàmà Jehova. N’ihi otú ihe si siere ya ike, o sooro nne ya na nna ya na nwanne ya nwoke na nwunye ya biri n’otu ọnụ ụlọ ha bi. Ndị mụrụ ya nyere ya iwu ka ọ ghara ịkụziri ụmụ ya Baịbụl. Ha gwakwara ụmụ ya ka ha na mama ha ghara ikwurịta gbasara Baịbụl.
Zarina chere otú ọ ga-esi nyere ụmụ ya aka ka ha mụta gbasara Jehova. (Ilu 1:8) O kpere ekpere rịọ Jehova ka o duzie ya ma nyere ya aka. Zarina meweziri ihe o kpere n’ekpere. Otú o si na-eme ya bụ ịkpọrọ ụmụ ya ma o mewe mkpapụ. Ọ na-eji ohere ahụ akụziri ha gbasara ihe ndị dị ebube Chineke kere. Ihe a mere ka ụmụ ya nwee mmasị n’Onye Okike.
Ihe ọzọ Zarina mere bụ ịchọta otú ọ ga-esi mee ka mmasị ahụ ha nwere sikwuo ike. O ji akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? * kụziere ha ihe. O si n’akwụkwọ ahụ depụta paragraf ụfọdụ na ajụjụ ha ná mpempe akwụkwọ. Ọ gbakwụnyere ahịrịokwu ụfọdụ na paragraf ndị ahụ o depụtara ka o nwee ike ịdịrị ha mfe ịghọta ya. Ọ na-ewerezi mpempe akwụkwọ ahụ na pensụl o ji dee ihe zoo n’okpuru ígwè e ji asa àkwà nke dị n’ebe a na-anọ asa ahụ́. Ụmụ ya banye n’ebe a na-asa ahụ́, ha na-agụ ya ma dee azịza ha.
Otú a Zarina si eme ihe a mere ka o nwee ike ịmụrụ ụmụ ya isiokwu abụọ n’akwụkwọ Bible Na-akụzi tupu ya na ụmụ ya akwagazie ebe ọzọ. N’ebe a ha kwagaziri, o nweziiri onwe ya ịzụ ụmụ ya n’enweghị nsogbu. N’ọnwa Ọktoba afọ 2016, e mere ụmụ ya abụọ ahụ baptizim. Obi dịkwa ha ụtọ na mama ha ji amamihe na akọ mee ihe ga-enyere ha aka ka ha na Chineke dịrị ná mma.
^ par. 3 Ọ bụzi akwụkwọ Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị? ka e ji amụrụ ọtụtụ ndị ihe taa
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Mpempe Akwụkwọ Dị n’Okpuru Ígwè E Ji Asa Ákwà
ijwex isiokwu 5